23 Responses to “စားကောင်းသောက်ဖွယ်..”
I love most of the veggies you mentioned sis, thanks for sharing the benefits for eating them!!
ငယ်တုန်းကအသီးရွက်သိပ်မစားတတ်ဘူး ခုကြီးလာတော့ အကုန်ကြိုက်တယ်...။
ဗဟုသုတ ရစရာလေးတွေ ဖတ်သွားတယ်
ဖတ်ချီငိုး ဆိုတဲ့အရွက်က တန်အိုး ဆိုတာနဲ.အတူတူဘဲလား သိပရစေနော်။အနံတော်တော်ပြင်းပါတယ်။
ဒီမှာ မစားချင်မှ အဆုံး..။
“ ဒီ ” ရခါနီးလေ စားလို့ ကောင်းလာလေလေ...
I like all veges you posted.Having vege is good for any point of view,i accept.Thanks for sharing and enjoy your travelling.
ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ရသွားတယ် အစ်မချော။ ဒီမှာတော့ အဲ့လို အရွက်စိမ်းစိမ်းတွေက ဈေးကြီးတယ်။ သူတို့မှ ကန်စွန်းရွက်၊ မုန်ညှင်းရွက် မစားကြတား(။ စိတ်ကုန်တယ်။
ကောင်းတယ်ချောရေ။ တစ်ခါတစ်လေ အခက်အခဲ
ပန်း ဂေါ်ဖီ က လိမ္မော်ရောင် နဲ့
ခုမှ သိတယ် ...း))
ဒီအထဲက တချို့အရွက်တွေကို အာရှဆိုင်မှာ တွေ့တွေ့နေ ပေမယ့် မြန်မာနာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ သိချင်နေခဲ့တာ....၊ ဗဟုသုတရတယ် မချောရေ...။
ဗဟုသုတတွေတော့အများကြီးပဲ မချော။ ပန်းဂေါ်ဖီတွေက တကယ့်ပုံတွေလား။ ဟိုတစ်ခါမချောက နှင်းဆီပန်းတွေကိုလားမသိဘူး။ အဲဒီလိုလုပ်ဖူးလို့ မေးကြည့်တာ။ စိတ်မဆိုးနဲ့။ ကျွန်တော်စလုံးရောက်တော့ ဘုမသိဘမသိနဲ့ ကျော်ကျော်စားနေတာ လက်စသတ်တော့ ထိုင်ဝမ်မုန်ညင်းတွေကိုး။ ဖတ်ချီငိုးက နံနံပင်နဲ့တူတယ်ဗျနော်။ ကျွန်တော်က အရွက်ကြီးတယ်ထင်နေတာ။ တော်သေးတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့်ဇနီးပါရမီဖြည့်ဖက်လေး အနားမှာရှိနေလို့။ နို့မို့ဆို ကျွန်တော်ကတော့ စူပါမားကတ်က ရောင်းသမျှစားကောင်းမယ်ထင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းကို မသိတာပဲရှိတာ။ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ထလုပ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ကြုံသလိုစားခဲ့တာ မနည်းတော့ဘူး။
အစိမ်းကြော် ကြော်စားဖို့ သတိရသွားပြီ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အသားတွေထက် ပိုနှစ်သက်တယ်။ အသက်ကြီးလာလို့လား မသိ။
ပန်ကြည့်ရင် ခေါ့င်းအတော်လေးမယ့် ပုံရှိတယ်... :)
မချောရေ... အောက်ဆုံးပုံမှာ ပြထားတဲ့ Watercress ဆိုတာ ရေမုန်ညင်းကိုပြောတာလား၊ မြင်းခွာရွက်ကို ပြောတာလားဟင်... မြင်းခွာရွက်ကို ဆိုဒ်တွေတွေများများမှာ Pennywort လို့ရေးထားတာ တွေ့လို့ပါ.. ကျွန်တော် သေချာမသိတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... =)